Abavelisi kunye nabaxhasi be - Electrolytic Plating I-China i-Electrolytic Plating Industry Factory
Grafayithi anode ipleyiti
I-graphite anode plate, i-anode barrel, i-graphite anode rod (eyaziwa ngokuba yi-graphite anode plate, i-graphite anode rod) ineempawu ezintle: ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba kakuhle kunye nokushisa kobushushu, ukulungiswa lula, ukuzinza kweekhemikhali, i-acid kunye ne-alkali corrosion, ephantsi Umxholo womlotha. Imveliso isetyenziselwa isisombululo se-electrolyzing aqueous, ukulungiselela i-chlorine, i-caustic soda, isisombululo se-electrolyzing ityuwa ukulungiselela i-alkali, okanye ukucoca i-graphite anode plate ingasetyenziswa njenge-anode eqhuba ityuwa ye-electrolyzing Isisombululo sokulungiselela isoda ebusayo. Ingasetyenziselwa unyango lwelindle kwimichiza yamachiza, elektroniki kunye neyelaphu. Kwiseli ye-electrolytic, ipali ukusuka apho ngoku iqukuqela isiya kwenye kwi-electrolyte ibizwa ngokuba yi-anode. Kwimveliso ye-electrolysis, i-anode yenziwe ngokubanzi ibe yiplati, ngoko ibizwa ngokuba yi-anode plate. Iimpawu zezinto ze-anode ze-electrolysis:
I-Electrolysis kunye ne-electroplating industry
Umzi mveliso we-Electrolysis kunye neelectroplating kubhekisa kwishishini elivelisa ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ipleyiti ye-anode kunye neplate yeelectroplating. Iimveliso grafayithi ekujoliswe zezi: anode grafayithi ipleyiti electrodetic, electroplating grafayithi ipleyiti, ntumbuluko grafayithi ipleyiti, njl
Ipleyiti grafayithi electroplating
Ukwenza i-Electroplating yinkqubo yokutyabeka umaleko obhityileyo wezinye izinyithi okanye iialloys kumphezulu wesinyithi ngokusebenzisa umgaqo we-electrolysis. Yinkqubo yokudibanisa umaleko wefilimu yentsimbi kumphezulu wesinyithi okanye ezinye izinto eziphathekayo nge-electrolysis, ukwenzela ukuthintela i-oxidation yesinyithi kunye nomhlwa, ukuphucula ukuxhathisa ukunxiba, ukuqhuba, ipropathi ebonakalisayo, ukumelana nokubola kunye nobuhle beemveliso.